WARBIXIN SIR AH: Khayraadkii badda Somalia oo lagu wareejiyay Shirkad Gaar ah: AKHRISO | AllJubbalandnews
WARBIXIN SIR AH: Khayraadkii badda Somalia oo lagu wareejiyay Shirkad Gaar ah: AKHRISO
MUQDISHO: ─ Dowladda Soomaaliya iyo maamul-goboleedyada dalka ayaa saxiixay heshiis shirkad gaar loo leeyahay lagu siiyey bixinta shatiyada kalluumeysiga ee xeebaha Soomaaliya.
Ka sokow agaasime ku xigeenimada Cabdrisaaq Shoole, ayaa lagu tiriyaa inuu xubin ka yahay ururka Saadicuun Bil-Xaq oo aabihiis uu keenay Soomaaliya.
Sidoo kale, Arrintaan ayaa waxaa ogolaaday maamul goboleedyada Somalia oo heshiiska dhinac ka saxiixay, ayadoo loo ballan-qaaday saami badan inay ku yeeshaan lacagta kasoo xaroota, sida ku cad warqadda heshiiska. Tasoo la filayo in saxiixa wasaaradda kallumeysiga Somalia oo ka dhiman dhawaan lasoo af-jaro.
Shirkaddan oo milkiilayaasheeda ay ka mid yihiin ganacsato u dhalatay dalka Qatar ayaa dhawaan billaabeysa in ay si toos ah ula wareegaan dhammaan bixinta shatiyada kalluumeeysi iyo ka ganacsiga kalluunka dalka Soomaaliya.
Ugu dambeyn, Fahad Yaasiin ayaa ku wehlin doonaa Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre socdaal la filayo inuu 13-ka bishan May ku tago dalka Qatar, lana filayo in heshiiska lagu dhameystiro.